कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७९-३-७ गते ५२ पटक हेरिएको
सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामपदारथ साह,तेलीले ब्रम्हपुरी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना रहेको बताउनु भयो । संघिय नेपालको संघिय संरचना अनुसार बनेको स्थानिय निकायको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनु भएका गाउँपालिका अध्यक्ष साहले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको भएपनि गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने बताउनु भयो । ८० वर्षको उमेरमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएका साह देशभरकै सबै स्थानिय निकायका निर्वाचित नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरु मध्य सबैभन्दा जेष्ठा पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो ।
२०७४ सालको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा स्थानिय विनोद कुमार साहसंग पराजित हुनु भएका साह राजनीतिका निकै पुराना खेलाडी हुनुहुन्छ । उहाँ राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा समेत सर्लाही जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा मनोनित हुनु भएको थियो । प्रजातन्त्र बहाली भएयता २०४७ सालदेखि राप्रपाको राजनीतिमा सक्रिय साह सुनिलबहादुर थापा कांग्रेसमा आएपछिसँगै आउनु भएको थियो ।
देशभरकै पालिका प्रमुखमध्ये सबैभन्दा बढी उमेरको जनप्रतिनिधि हुनु भएको छ कस्तो महशुस भयो ? भन्ने राससको प्रश्नमा उहाँले आफ्नो वृतान्त सुनाउनु भयो । विद्यार्थी जीवन सम्पन्न गरेपछि २०२८ सालबाट आफु राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेको बताउँदै आफ्ना पिताले पनि करिब ४० वर्ष समाजको अगुवा भएर काम गरेकाले उहाँले आफुलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नु भएको बताउनु भयो ।
“म पनि सोही लय समातेर करिब ३८ वर्षदेखि निरन्तर समाज र जनताको बीचमा बसेर दुखःसुख साटिरहेको छु । अहिलेको अवस्था त्यसैको परिणाम हो जस्तो लाग्छ ।” उहाँले बताउनु भयो ।
“गत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन पनि मैले राप्रपाबाट लडेको थिएँ । त्यतिबेला जित हासिल गर्न नसके पनि सम्मानित मत ल्याएर दोस्रो भएको थिएँ । निर्वाचित हुँदा कुनै सुख सुविधाको अनुभव गरेको छैन । गाउँपालिका र गाउँपालिकाभित्रका जनताको जीवनस्तरलाई कसरी माथि उकास्ने, उनीहरूलाई कसरी सहजता प्रदान गर्ने लगायत कुराको जिम्मेवारी बोध भएको महशुस गरेको छु ।” उहाँले राससलाई बताउनु भयो ।
कृषि,सिँचाई,शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष साहले यो उमेरमा पनि के गर्छु र के गर्न सक्छु भनेर देखाउन पनि सक्छु । यो उमेरमा पनि मेरो काम गर्ने इच्छाशक्तिलाई देखेर नै यहाँका जनताले मलाई निर्वाचित गराएका हुन ।
यो उमेरमा पार्टीबाट कसरी टिकट पाउनु भयो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले “मेरो राजनीतिक यात्रा,लगनशीलता र जनताले म प्रति देखाएको सद्भावकै कारण मैले चुनावमा टिकट पाएको हुँ जस्तो लाग्छ । जनताको विश्वास जित्न सकेकाले पनि मलाई पार्टीले टिक दिएको हुनुपर्छ ।”बताउनु भयो ।
मेरो क्रियाकलाप हेरेर यो व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेर पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले पत्याएकाले पनि मैले टिकट पाएको हुँ । र जनताले हाम्रो काम सफल रुपमा गर्छ भन्ने सोचेर जिताएका बताउनु भयो ।
उहाँले“मेरो प्रतिस्पर्धी म भन्दा अघि मलाई नै हराएर गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो ।उहाँको कार्यकालमा भएका गल्ती र कमीकमजोरी विरुद्ध मैले प्रजातान्त्रिक र व्यस्थित ढंगले विरोध गरेको थिए । धेरै ठाउँमा तालाबन्दी भयो, घेराबन्दी हुने गरे पनि मैले त्यस्तो केही गरिनँ ।” बताउनु भयो ।
मैले पहिलेदेखि नै गाउँपालिकाले गरेका कमी कमजोरीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । पालिकाले गरेका कामहरू जनता समक्ष प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । लामो समयदेखि जनताको बीचमा बसेर काम गरेको,उनीहरुको सुख दुःखमा साथ दिएको व्यक्ति भएकाले पनि मलाई गाउँपालिकाबासीहरूले विश्वास गरेका अध्यक्ष साहले बताउनु भयो ।
“यसअघिको निर्वाचमा मैले राप्रपाबाट पालिका अध्यक्षमा चुनाव लडेको थिएँ । राप्रपाको नाम निसाना नहुँदा पनि मैले आफ्नै बलबुतामा करिब २ हजार मत ल्याएर दोस्रो स्थान हासिल गरेको थिएँ । यो पटक मलाई नै हराउने निवर्तमान अध्यक्ष जो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई करिब १ हजार ३ सय मतान्तरले पराजित गरें । जनताको पक्षमा निरन्तर र लगनशिल भएर मैले गरेको काम नै मेरो चुनाव जित्ने प्रमुख आधार बन्यो ।” अध्यक्ष साहले बताउनु भयो ।
आराम गर्ने उमेरमा दौडधुप गर्नुपर्ने भूमिकामा पुग्दा असहज त हुँदैन नी ? भन्ने प्रश्नमा “भगवानको कृपाले अहिलेसम्म ठिक छु । उमेर बढी हुँदा केही थकाई त महशुस हुन्छ । तर काम गर्ने इच्छाशक्तिले थकाईलाई बिर्साएर मलाई काम गर्ने उर्जा प्रदान गर्छ । पशुपतिनाथ र जानकी माताको कृपाले अहिलेसम्म काम गर्न मलाई उमेरले छेकेको छैन ।” बताउनु भयो ।
निजामती कर्माचारीहरु जस्तै बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजे सम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष साहले आफुलाई उम्मेरले काम गर्न नरोक्ने बताउनु भयो । उहाँले मैले अबको पाँच वर्ष जसरी पनि काम गर्नुपर्छ र गर्छु । तपाईले नै पाँच वर्षपछि तपाईको अवस्था के छ भनेर सोध्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
अहिले म स्वस्थ नै छु । अहिलेका युवाहरू त औषधिको भरमा चलिरहेका छन् । मैले कुनै औषधि सेवन गर्दिन भनेर झुट बोल्न त मिल्दैन । म केही वर्षदेखि सुगर र ब्लड प्रेसरको विरामी छु । मैले त्यसको औषधि पनि सेवन गरिरहेको छु । भने मुटुको पनि अप्रेसन भएको बताउनु भयो । तर मेरो दैनिक जीवन प्राय एकै प्रकारको जस्तो हुन्छ । म विहानै उठ्ने, व्यायम गर्ने योग गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गरेपछि मात्र घर बाहिर निस्किन्छु । यो मेरो नियमित क्रियाकलाप हो । यसले पनि मलाई स्वस्थ रहन मद्दत गरेको छ । त्यस्तै म माछा, मासुजन्य कुरा खाँदिन । शाकाहारी खाना मात्र खान्छु । यसले पनि मलाई स्वस्थ बनाएको छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको कार्यकालमा ब्रम्हपुरी गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले“मैले अघि पनि भनेको छु । म कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजनामा छु । कृषिमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सकियो भने बेरोजगार मानिसहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् । आफ्नै क्षेत्रमा उत्पादन भयो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुका साथै किसानहरुको आर्थिकस्तर पनि वृद्धि हुन्छ । अबको पाँच वर्ष जनताको इच्छा आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छृु ।”बताउनु भयो ।
पछिल्ला केही तथ्यांक र प्रतिवेदनहरूले पनि सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहहरुमा भएको देखाएको छन् ।मेरो पालिकामा त्यस्ता खालका गतिविधि रोक्ने काम गर्छु र गाउँपालिकावासीहरुलाई परिवर्नतको महशुस गराउँछु । स्थानीय सरकार कसरी चल्छ भन्नेलाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछु । उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अहिले निर्माण उपभोक्ता समितिको गठन,काम कार्बाही लगायतका फाईलहरु र कामहरुको अनुगमनमा व्यस्त रहेको बताउनु भयो ।